DIGNIIN KUSOTA BULSHA WEYNTA SOOMAALIYED. GAROONKA ADAN CADAN. – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA DIGNIIN KUSOTA BULSHA WEYNTA SOOMAALIYED. GAROONKA ADAN CADAN.
W/Q: Taliye ku xigeenkii hore ee NISA Cabdisalaan Yuusuf Guuleed.
Ugu horentii aad iyo aad uga xumay muqaalada hoose iyo wixii garoonka ka dhacay maanta iyo shalay.
Cawaaqib xumo aad u weyn baana lasoo socota garoonka diyaaradaha Adan Cade, hadaan laga hor tegin. Muda hada laga joogo ku dhowaad hal sanad ayaa waxa Fahad ka bedelay garoonka dhamaan dadkii horay uga shaqay jiray.
Waxana lagu soo bedelay, koox cusub oo intooda badan golabada dalka keenay. Bilowgii 2021, waxa lagu soo kordhiyey ciidan cusub, oo qaar kood waardiyeyaan, terminal kii hore oo hada dayactir xowli ku socda ay ka wadaan Fahad iyo kooxdiisa.
Ciidanka Nisa, ee garoonka lakenay ayaa dagaal ku bilaabay shaqaalaha garoonka. Dad ma mid ah, shaqalaha garoonka ayay dhowr marar hore jirdil ugu geysteen inkasta oon shaacin. Shaqalaha qaarkood ayaa sheegay in aad loo jir dilay, kadibna musqul la dhex fariisiyey, sawirana laga qaaday iyagoo qaawan.
Waxa shalay diyaarad kasoo degay 2 qofood oo ajaanib ah, oo sheegay in ay Journalist yihiin, lkn aan visa wadan. Koox Nisa ka socota ayaa ayaa xoog ugala wareegtay shaqalihi imigareshinka sidaasna gudaha wadanka kusoo geliyey.
MAANTA WIXII DHACAY
Maanta oo taariiqdu tahay 22 April 2021, ayaa Kooxdii Nisa ee shalay sida xoogaa uga fara maroojiyey shaqaalihii hey’ada socdaalka kusoo celsheen 2 dii passport ee ajaanibta. Kadibna waxay isku dayeen in ay xoog ku saaraan VISA HA, sidaasna dagaalku ku bilowday, sida ay ii xaqiijiyeen ila xog ogaal ah.
Sida sawirada hoose idin kaga muuqata. Waxay si ula kaca u burburiyeen qalabkii lagu shaqaynayay, sida, mashiinkii faraha lagu qaadayay, Kaamaroonkii iwm.
Waxa jirtay, in saraakiil (ERITREA) ah mudooyinkii dambe ka shaqaynayeen, garoonka, qaas ahaan Xaafiiska Nisa. Garoonku amaan ma ahan, mana la isku haleyn karo sida uu hada yahay.
Previous articleDjabuuti oo u jawaabtey soomaaliya
Next articleMaxay ahaayeen nimankii dartood lsku laayeen socdaal iyo NISA muqdisho
Nuxurka Kulan dhexmaray Safiirka midowga Yurub iyo Guddoomiyaha Maxkamadda Sare
Qaramada midoobay oo walaac ka muujisay xaaladda qaxootiga Ku Xaniban xuduudka...